Ahoana ny fomba fanaovana multitabes nefa tsy variana toy ny pro | Famoronana an-tserasera
Jose Angel | | Nohavaozina tamin'ny 10/07/2018 15:05 | General, Cheats
Ity fizarana ity dia zava-dehibe foana rehefa manatanteraka asa amin'ny solosaina ianao. Indrindra raha any an-trano no anaovanao azy. Raha resaka fanadiovana dia fantatsika hoe faritra iza no tokony hodiovina ary tsy miraharaha ny filaminana izahay. Toy ny amin'ny mekanika, fantatray fa mila manamboatra fiara iray ianao avy eo amin'ny iray hafa. Lasa sarotra io baiko tsotra io rehefa misy zavatra manelingelina antsika amin'ny solosaina sy ny fanamorana ny fitsambikinana avy amin'ny lahasa iray mankany amin'ny iray hafa, nefa tsy nahavita na inona na inona. Ny fitadiavana andraikitra marobe nefa tsy variana amin'ny fanokafana gazety dia sarotra, fa ilaina.
Mampiseho ny fikarohana fa very hatramin'ny 40 isan-jato isika ny famokarana ataontsika raha manao zavatra maromaro amin'ny fotoana iray isika, satria manao fahadisoana bebe kokoa ary maharitra kokoa ny famitana zavatra. Soa ihany, hIreto misy teknika tsotra azontsika ampiasaina hitantanana ny fotoanantsika ary hikarakara tsara kokoa.
1 Ahenao kely ny kiheba solosaina
2 Manaova naoty antsipiriany
3 Ovay ny toerana iasana
4 Mametraha fandaharam-potoana manokana
Ahenao kely ny kiheba solosaina
Avelao ny horonantsary paikadin'i Fortnite ary ny fomba hahatratrarana zava-bita amin'ny tetika sasany. Adinoy ny takelaka amin'ny gazety famindrana na vaovao vaovao. Esory ao amin'ny tranokalanao izany rehetra izany, mba hiresahana fotsiny amin'ireo kiheba ilainao hamita ny asanao.
Hevitra iray ny fampidirana ny asanay rehetra amin'ny fampiharana toa ny Todoist na Wunderlust. Izahay dia mitazona ireo lahatsoratra ao amin'ny Pocket na ao amin'ireo tianao indrindra amin'ny browser (hamaky aoriana). Ary noho izany, ireo takelaka mahaliana antsika hamita ilay asa fotsiny no hojerentsika. Raha toa ka tsy vitanao ny manidy ny kiheba amin'ny tenanao, misy fitaovana sasany. Ny fanitarana izay atolotray dia 'vahana'. Tsotra, tsotra mahagaga ary mahomby. Lazao izay tianao hifantohana ary esory ny fanelingelenana hafa rehetra. Fanombohana izany.
Manaova naoty antsipiriany
Aza atao ambanin-javatra ny maha-zava-dehibe ny fananana naoty an-tsoratra miaraka amin'ny fahazaranao sy amin'ireo asa miandry izay tokony hatao. aza misy fitaovana toa an'i Evernote fanta-daza o OneNote Amin'ity tranga ity dia manoro hevitra aho ny hampiasa zavatra azo tsapain-tanana. Toy ny taratasy miraikitra na fandaharam-potoana. Amin'izany fomba izany dia hadinontsika kely ireo fanelingelenana mety hitranga amin'ireo 'singa' bebe kokoa amin'ny solosaina. Topi-maso vetivety amin'ny fandaharam-potoananay dia mahazo isika Andao hatao.
Indraindray isika mieritreritra fa manana fahatsiarovana tsara dia tsara ka tsy ilaina ny manoratra azy, fa tsy ny fananana fahatsiarovana tsara na ratsy. Indraindray, ny fanovana ny toe-javatra eo amin'ny asa iray sy ny iray hafa dia mety hanelingelina anao sy hanakana anao tsy hahatadidy izay tokony nataonao. Ny fananana naoty dia manala ny tsindry amin'ny fiezahana hahatadidy ary manamora ny fanovana azy io. fifantohana avy amin'ny lahasa iray mankany amin'ny manaraka.
Ovay ny toerana iasana
Rehefa miasa avy any an-trano dia mora be ny mipetraka eo amin'ny sofa ary lazao aminay fa "eto aho dia hanao ny asa manaraka", lainga fotsiny io fehezan-teny io. Vantany vao tafapetraka eo isika dia very fotoana ary lasa variana. Noho izany, ny fiasana ao an-trano dia tokony hahatonga antsika ho hentitra. Ny fifidianana toeram-piasana manokana ho an'ny lahasa tsirairay dia afaka manampy anao hahatratra ny filaminana. Raha manana lahasa izay antsoinao ianao 'Mavo'Hanao izany asa izany ao amin'ny "efitrano 1"; Raha ny asanao dia 'Maitso' Hanao izany ao amin'ny "efitrano 3".
Raha miasa ao amin'ny birao ianao dia afaka manao azy mangina amin'ny toerana. Na ny enti-mody 'mavo' ao amin'ny birao na ilay "maintso" ao amin'ny tranomboky. Tsy maintsy misafidy araka ny toe-javatra mety indrindra aminao ianao amin'ny lahasa samihafa.
Mametraha fandaharam-potoana manokana
Aza manandrana mametaka matetika amin'ny fotoana rehetra fa manokana fotoana fohy hifantohana amin'ny asa manokana: adiny iray hanoratana an'io bilaogy io, efatra hamaranana ireo sary ireo, sns. Ity teknika ity dia azo antsoina hoe 'Ny teknikan'i Pomodoro': Zarao ho fizarana 25 minitra ohatra ny fotoana, misy fiatoana dimy minitra eo anelanelany. Raha vantany vao vita ny tsingerina dia afaka manangona fitsaharana lava kokoa ianao (20 minitra).
Amin'ny ankapobeny, ny 25 minitra dia fotoana ampy handrosoana amin'ny lahasa iray ary ny fiatoana dimy minitra dia fohy dia kely mba tsy hanelingelina ny hevitro momba ny asa. Mety aleonao lavitra ny andiana asa sy ny fiatoana kely kokoa. Manandrama amin'ny fahafaha-manao ary mitadiava gadona mety aminao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Ahoana ny fomba fanaovana multitabes nefa tsy variana toy ny pro
Emilio Castello Ambou dia hoy izy:
Ahoana ny fomba hananana multitask toy ny pro nefa tsy variana
Valiny tamin'i Emilio Castelló Ambou